Vina IEM: laharam-pahamehan’ny kandidà Rajoelina ny fandriampahalemana | NewsMada
Vina IEM: laharam-pahamehan’ny kandidà Rajoelina ny fandriampahalemana
Nitondran’ny kandidà Rajoelina sy ireo manampahaizana mpiara-miasa aminy famelabelarana ny momba ny vina IEM, teny amin’ny CCI Ivato, omaly. Nanaovany velirano amin’ny vahoaka ny hanatanterahana ireo fanamby miisa 13. Mametraka ho laharam-pahamehana ny fametrahana fandriampahalemana sy filaminana ny tenany. Anatin’izany ny fiarovana sisin-tany sy ny harena voajanahary. Ny ady atao amin’ny tsy fandriampahalemana andavanandro. Manaraka izany ny angovo sy ny rano madio fisotro, toy ny fampidinana ny vidin’ny herinaratra sy ny fanapariahana ny jiro amin’ny faritra maro. Teboka fahatelo ny ady atao amin’ny kolikoly sy ny fitsarana tsy mitanila. “Tsy azo andeferana mihitsy izany. Hanakaiky vahoaka ny fitantanan-draharaham-panjakana… “, hoy izy.
Fanamorana ny fahazoan’ny tanora asa
Manampy ireo ny fanabeazana ho an’ny rehetra ka hijerena manokana ny rafim-pampianarana, ny fampiroboroboana ny fampianarana teknika, indrindra ny any amin’ny faritra. Teboka fahadimy ny fahasalamana ho an’ny daholobe. Hojerenan manokana ny hahazoan’ny rehetra mitsabo tena, ny fisotroan-dronono…
Ny fanomezana asa sy ny fanamorana ny hahitan’ny tanora izany. Fanamafisana ny fahaiza-manao ary ny fananganana ny foibe ho an’ny asa. Teboka fahafito ny fanohanana ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fanomezana vahana ny fampiasam-bola ary ny vita malagasy. Tsy hadino ny vehivavy sy ny mira lenta ary ny tanora homanina hiatrika ny ho avy. Hiantohana ny fahavitan-tena eo amin’ny sakafo amin’ny alalan’ny fampitomboana ny voka-bary, ny fampivoarana ny fiompiana sy ny jono… Ny fahaiza-mitantana ny harena voajanahary ka anisan’izany ny fizahantany maharitra, ny ady atao amin’ny famotehana ny tontolo iainana. ..
Fanorenana tanàna vaovao sy trano fonenana
Teboka lehibe faha-11 ny fanorenana tanàna vaovao sy ny fanamboaran-dalana ary ny seranana. Ny trano fonenana sy ny fanamorana ny hahazoan’ny rehetra izany. Ankoatra izany, ny fametrahana ny fiaraha-miasa isam-paritra, ny distrika sy ny kaominina, miaraka fananganana faritra fampandrosoana manokana. Teboka faha-13 ny hambom-pom-pirenena sy ny fanatanjahantena. Fanorenana fotodrafitrasa isam-paritra, ny foibe ho an’ny mpanao fanatanjahantena sy ny hahazoana vatsim-pianarana amin’ny taranja…